ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှု ဖြစ်ပွား၊ ပြန်ပေးသမားကို အသေပစ်သတ် - Yangon Media Group
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှု ဖြစ်ပွား၊ ပြန်ပေးသမားကို အသေပစ်သတ်
စစ်တကောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလေကြောင်းလိုင်း ဘီမန် BG 147 လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွင် ပျံသန်းသည့် ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈ဝဝ လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ခရီးသည် ၁၃၄ ဦးနှင့် လေယာဉ်ဝန်ထမ်း ၁၄ ဦးပါဝင်သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်မှာ ဒါကာမြို့မှ ဒူဘိုင်းသို့ ပျံသန်းသော လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ ပြန်ပေးဆွဲသူက လေယာဉ်ကို နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်း စစ်တကောင်းလေဆိပ်သို့ ဆင်းစေခဲ့သည်။ စစ်တကောင်းလေဆိပ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့က အဆိုပါခရီးသည်တင်လေယာဉ်အား အဓမ္မဝင်ရောက်စီးနင်းကာ ပြန်ပေးသမားကို ပစ်သတ်ခဲ့ ကြောင်း AFP သတင်းက ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။
ပြန်ပေးသမားမှာ အသက် (၂၅၊ ၂၆)နှစ်ခန့်ရှိ မာဟာဒီဆိုသူ ဖြစ်ကြောင်း၊ ¤င်းမှာသေနတ်ဒဏ်ရာရရှိပြီး၊ ဖမ်းမိခဲ့ရာ ခဏအတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု စစ်တပ် ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်ချုပ်မိုတာရာမန်က ပြောကြားလိုက်သည်။ မိမိတို့တပ်ဖွဲ့က ပြန်ပေးသမားအား လက်နက်ချရန်ပြောခဲ့ သော်လည်း ၎င်းကလက်နက်ချ ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့၍ ပစ်သတ်ခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကပြောခဲ့သည်။ ပြန်ပေးသမားထံမှ ပစ္စတို တစ်လက် သိမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ စစ်တကောင်းလေဆိပ် အား ကြည်းတပ်၊ ရေတပ်နှင့် အထူး ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က ပိတ်ဆို့ထားလိုက် သည်။ ခရီးသည်များမှာ ဒါကာ မြို့မှ ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက်ကြမည့် ခရီးသည်များ ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ လေယာဉ်မှာ ဒါကာမှ ထွက်၍ ၁ဝ မိနစ်ခန့်တွင် ပြန်ပေးသ မားက သေနတ်နှစ်ချက်ပစ်ကာ လေယာဉ်ကိုပြန်ပေးဆွဲကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု စစ်တကောင်း လေဆိပ်ခရီးသည်တစ်ဦးက ပြော ပြခဲ့သည်။
လေတပ်ဒုတိယဦးစီးချုပ်မိုဖစ်က ပြန်ပေးသမားနှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်စကားပြောနေစဉ် ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့က လေယာဉ် ကို ဝင်စီးရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပြန်ပေးသမားက ဝန်ကြီး ချုပ်ရှိတ်ဟာဆီနာနှင့် စကားပြောရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု မိုဖစ်က ပြောခဲ့သည်။ ပြန်ပေးသမားတွင် ပစ္စတိုသေနတ်နှင့် ဗုံးနှင့်တူသောအရာတစ် ခုလည်းပါသည်ဟု လေယာဉ်ခရီး သည်တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။ ပြန်ပေးသမားက လေယာဉ် ခေါင်းခန်းမဖွင့်ပါက လေယာဉ်ကို ဖောက်ခွဲပစ်မည်ဟုပြောကြောင်း လေယာဉ်ဝန်ထမ်းက တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ပရိုသွန်အေလိုသတင်းစာကို ဆက်သွယ်ပြောခဲ့သည်။
အခြားလေယာဉ်ဝန်ထမ်းများက လေယာဉ်၏ အရေးပေါ် ထွက်ပေါက် လေးခုမှ ခရီးသည်များကို ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ပြန်ပေးသမားက လေယာဉ် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို ဓားစာခံလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ပြန်ပေးသမားမှာ ဦးနှောက် ရောဂါရှိသူဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့ရာတွင် ¤င်းနှင့်သေနတ်ကို လေယာဉ်ပေါ်သို့ မည်သို့သယ်ယူ လာသည်ကို စစ်ဆေးသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် အသေခံဗုံးပေါက်ကွဲမှုအတွက် အိန္ဒိယအစိုးရက လူရာပေါင်း များစွာကို ဖမ်းဆီး
ရွှေသံလွင် မီဒီယာ (Sky Net) သို့ ကမ္ဘာ့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ လာရောက်လေ့လာ
မုံရွာနှင့် မန္တလေးမြို့မှ ဝယ်လက်များက ဈေးပြိုင်လာရောက် ဝယ်ယူမှုကြောင့် ကလေးဒေသ၌ နေကြာစို??
လျှိုမြောင်အတွင်း၌ အသားအရေ မရှိတော့ဘဲ အရိုးစုသာ ကျန်ရှိနေသော ကြိုးဆွဲချ သေဆုံးနေသည့် အမျု??
ဘလိုင်းကို ခေါ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို စီးရီးအေကလပ် ရိုးမား ငြင်းဆန်ခဲ့